I « Maman Céline », fanilon’ny vehivavy vonon-kitondra | Conseil National des Femmes de Madagascar
← L’égalité des sexes en politique : encore du chemin à faire pour Madagascar.
Etre femme et se faire élire en Androy : une gageure ? →
I « Maman Céline », fanilon’ny vehivavy vonon-kitondra
Ho Ben’ny Tanànan’Ambanisarika, distrika Ambovombe Androy ? Tsy mba nampoizin’dRalalarisoa Céline izany.
Raha handeha hisotro ronono izy tamin’ny 2003, dia nanatona an’i Maman Céline ny olobe tao an-tanàna : izy efa hany vehivavy chef de canton nandritra ny Repoblika Voalohany manontolo, manaiky ve izy ho vehivavy ben’ny tanàna aty Ambovombe Androy ? Hatramin’ny naha firaisam-pokontany na commune an’Ambanisarika tamin’ny 1975 manko, dia tsy mbola nisy ben’ny tanàna mba nahita fianarana. Vokatr’izany, tsy mba nahita fandrosoana firy ny tanàna, hoy ireto olobe, ka aleo indray mba olona avara-pianarana no hitondra… “na dia vehivavy aza”.
Ireto lehilahy to teny eo amin’ny tanàna no nikarakara, ka dia lany soa aman-tsara i Maman Céline – 83%-ny mpifidy no nandatsa-bato ho azy.
Vehivavy mpitondra sy fomba nentim-paharazana
Raikitra ho “Sijamena” ary ny anarana fiantso an’i Maman Céline. Hay amin’ny tantaran’iny faritr’Androy iny efa nisy ihany vehivavy nitondra, saingy toa adino. I Sija dia vehivavy nanam-pahefana fahagolan-tany, izay nampiadana sy nampandroso ny tanàna nentiny, noho ny fahendreny.
Nifanaraka ireto olobe sy Ramatoa “Sijamena”: raha lanonam-panjakana, dia hanome ny haja mendrika ny olobe ny Ben’ny Tanàna ; fa raha hetsika araka ny fomban-drazana kosa, dia miandry hantsoin’ny olobe Rtoa Ben’ny Tanàna vao maka ny toerana natokana ho an’ny manampahefana.
Ndeha ary fenointsika vehivavy ny seham-pitondrana rehetra !
Tato anatin’ny folo taona izay, nihaiky ny rehetra fa mendrika ny fitondran-dRtoa Ben’ny Tanàna : hainy ny mihaino ny mponina, mahita hevitra izy hamahana ny olana, madio sy mangarahara ny fitantanany – sanatria izy no hitaky vorontsiloza, na ampahan’ny vola hanatanterahana tetikasa.
Matoky an’i Maman Céline ny vahoaka entiny ao Androy ao, ka vonona ny hanondrotra azy hampiakatra ny teniny hatrany amin’ny sehatra ambony, any amin’ny Antenimeram-pirenena any.
Maro ny vehivavy tahakan’dRalalarisoa Céline manerana an’i Madagasikara – vonona, mahay, tsara sitrapo, ka tokony ho sahy hilatsaka ho fidiana, na ho ben’ny tanàna, na ho mpanolo-tsaina, na ho solombavambahoaka !